ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိုင်ဖိုင်စက်တွင် ၀ င်းဒိုးဒရိုင်ဘာများသာရှိလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ | Linux မှ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိုင်ဖိုင်စက်တွင် Windows ဒရိုင်ဘာများသာရှိလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
လေ့လာမှုစင်တာများနှင့်လုပ်ငန်းစင်တာများတွင် Wi-Fi ကွန်ယက်များသည်လူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှဤပြaddressနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ PC ၏ Wi-Fi စက်တွင် ၀ င်းဒိုးအတွက်ယာဉ်မောင်းများသာရှိလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ဤအခြေအနေသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကြုံတွေ့ရပါက Linux သုံးစွဲသူများကိုမကြောက်သင့်ပါ။ ndiswrapper ဟုခေါ်သော application သည် Windows driver နှင့် device ကိုလည်ပတ်စေသည်။
၎င်းကို Debian6နှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျကိုအသုံးပွုခွငျးမှာ -
၁။ ndiswrapper ကို Install လုပ်ပါ
$ sudo apt-get install ndiswrapper-common ndiswrapper-utils-1.9 wireless-tools
၂။ ဖိုင်များကိုကူးယူပါ .INF y အချစ် သင်၏ PC ပေါ်ရှိ folder တစ်ခုမှ CD / ဥပမာ / home / tu_user ဖြစ်သည်
3: ယာဉ်မောင်း Install လုပ်ပါ
$ sudo ndiswrapper -i nombre-driver.inf
နောက်ဆုံးတွင် ndiswrapper driver ကိုထည့်ပါ
ဒီ command ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ndiswrapper module မရှိဘူးလို့ပြောရင်အမှားတစ်ခုပေးမိရင် (ကျွန်တော်တို့ဟာ Bigmem kernel ကို install လုပ်တဲ့အခါဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာဆိုတော့မကြာခဏဖြစ်ခဲ့တာ)
$ sudo m-a a-i ndiswrapper
ဤရွေးချယ်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် module ကိုပြန်လည်စုစည်းလိမ့်မည် (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော kernel အတွက် driver) ။
အဘယ်သူမျှမကြိုးမဲ့ extension များ lo ။ eth0 အဘယ်သူမျှမကြိုးမဲ့ extension များ။ wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID: off / any Mode: စီမံထားသည့် Access Point - မပါ ၀ င်သော Tx-Power = 20 dBm ကြာရှည်သောကန့်သတ်ချက်ကိုပြန်လည်ရယူပါ။
အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုလျှင် system စတင်သောအခါ ndiswrapper driver load လုပ်သည်။
ကြိုးမဲ့ interface ကိုသက်ဝင်စေရန်
မှတ်ချက် - အကယ်၍ သင့်တွင် Linux X64 ရှိပါက driver များသည် X64 architecture အတွက်လည်းဖြစ်ရမည်
ndiswrapper ပရိုဂရမ်ကို USB သို့မဟုတ် PCI ဖြစ်နိုင်သည့်ကြိုးမဲ့ WIFI ထုတ်ကုန်များ၏ယာဉ်မောင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော်လည်းအခြားစာရွက်စာတမ်းများတွင် Winmodems နှင့်အခြား hardware များတွင်လည်းအလားတူပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုဆိုထားသည်။ ကျွန်ုပ်ကြိုးစား။ မရပါ၊ စာဖတ်သူများ။
အခုဆိုရင်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုခံစားနိုင်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Wifi Radar ဥပမာကွန်ယက်များကို detect လုပ်ဖို့ပရိုဂရမ်များကိုသင် install လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခြားဆောင်းပါးဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိုင်ဖိုင်စက်တွင် Windows ဒရိုင်ဘာများသာရှိလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
16 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဒီဖြေရှင်းချက်သည် Wheezy တွင်လည်းအလုပ်လုပ်မလား။
Blaire pascal ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်၏ WiFi ကဒ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုနာကျင်မှုများစွာမပေးခဲ့ပါ။ Wicd အတွက် NetworkManager ကိုသာပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကားမောင်းသူများသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။
Blaire Pascal အားပြန်ပြောပါ
ငါဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုတစ်ခါသုံးပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်၊ ဒါက Mandriva 2011 နဲ့အတူတူပဲ။
ကျွန်ုပ်၏ ၂၀၀၆ အောက်တိုဘာ Sony Vaio laptop တွင် Wi-Fi အတွက်ခလုတ်တစ်ခုရှိသည်။ Sony Vaio နှင့် Toshiba မော်ဒယ်များတွင်ပါရှိသော switch သည်အလွယ်တကူပျက်စီးသွားပြီးသင်၏ Wi-Fi ကိုပျက်စီးစေသည်။ ဒါကကျွန်မကိုဒုက္ခရောက်စေခဲ့တာပဲ။
မကြာသေးမီက D-Link အမှတ်တံဆိပ်မှ DWA-125N မော်ဒယ် Wifi အတွက် adapter ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ထိုအခါ fuck ဆိုတဲ့ switch သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကွန်ယက်ကိုပိတ်ထား! ငါအရမ်းခံစားခဲ့ရပေမယ့်ဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်
ဒီနေ့ ဒီ Wi-Fi adapter ကို အသုံးပြု၍ D-Link အမှတ်တံဆိပ် Linux အတွက်ဒရိုင်ဘာများကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုနှင့်စီးပွားဖြစ်ဒရိုင်ဘာများကိုအသုံးမပြုပဲခံစားနိုင်သည်။ 🙂
ငါဒီရှေးခယျြမှုကိုအများအားဖြင့် Broadcom 4318 နဲ့သုံးပြီးအချို့သော distros တွေမှာကွဲလွဲနေပေမယ့်လက်ခံထားတဲ့ driver တွေဟာ windows xp နဲ့သဟဇာတဖြစ်ရမယ်။
ယခုငါအနည်းငယ်ပိုသိလာပါက package နှင့် voila ကို download လုပ်ရန် cable မှတစ်ဆင့် connection firmware-b43-installer ကို install လုပ်လိုက်သည်။
Hmm, ဒီလည်း Arch အတွက်တရားဝင်ဖြစ်ပါ့မလား
သို့သော်… kernel မှထောက်ပံ့မထားသောခေတ်သစ် HW wifi ရှိပါသလား။
ဟယ်လို! ခေါင်းစဉ်လုံးဝလုံးဝမပါသောလျင်မြန်သောမေးခွန်း သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိလား ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းမှကြည့်သောအခါကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ထူးဆန်းနေပါသည်။ ဤပြissueနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့်အခင်းအကျင်းသို့မဟုတ်ပလပ်အင်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားရှာဖွေနေသည်။
သင့်တွင်အကြံပြုချက်များရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ မျှဝေပါ။
Elav, မင်းဘယ်မှာလဲ ကျွန်ုပ်တွင် Facebook၊ Twitter သို့မဟုတ် Google+ မပါရှိသောကြောင့်ဤအရာသည်သင့်ကိုဆက်သွယ်လိုသောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
Thunar နဲ့အတူထူးဆန်းတဲ့တစ်ခုကသူရဲ့မျက်တောင်ထွက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းတာကကျွန်တော်ဟာ Xubuntu 12.10 မှာခဏတစ်ဖြုတ် (မနှစ်က) ကိုဘာမှ update မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာပါ။ အထူးသဖြင့်မောက်စ်ကိုငါနှိပ်လိုက်ရင်အရမ်းကိုထူးဆန်းတယ်။
Hahahaha, Thunar မှာမျက်တောင်တွေတကယ်ရှိသလား။ အိုး !! ငါ hahahaha ငါမသိခဲ့ဘူး .. ငါ့သူငယ်ချင်း။ ငါ KDE က Conqi ရဲ့ဂူထဲမှာပိတ်မိနေလို့ငါ့ကိုထုတ်ပစ်မယ့်သူမရှိဘူး။ Xfce ကိုဆက်ရေးဖို့ Virtual Machine ကို install လုပ်ရတယ်။
မင်္ဂလာပါ , Elav တုန့်ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟေ့၊ ထူးဆန်းနေတယ်။ ငါ့မျက်တောင် Thunar ကိုမထွက်တော့ဘူး။ ပို၍ ပင်ပန်းသည်မှာ: Iron browser တွင် YouTube interface အဟောင်းနှင့်တူသည်။ Firefox တွင်ကျွန်တော်အသစ်ကြည့်သည်။ ငါနားမလည်ဘူး။
ကောင်းပြီ၊ ငါတောင်းပန်တာကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ ငါ KDE ကမင်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ထင်တယ်။ ငါအခွင့်အလမ်းမရသေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီလက်တော့ပ်ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပြီး Xfce နဲ့ပါ။
ကောင်းပြီဟုတ်ပြီ၊ အရာအားလုံးဟာထူးဆန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ 😕
camacho helvert ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Linux အတွက်အသစ်ပါ။ driver ကိုထည့်သွင်းရန်သွားသောအခါအောက်ပါအမှားဖြစ်ပါသည်။ $ sudo ndiswrapper -i net8192cu.inf
net8192cu.inf ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။ /usr/sbin/ndiswrapper-1.9 line 162 ရှိဖိုင်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မရှိပါ။
helvert camacho အားစာပြန်ပါ
Android နှင့်အတူ Polaroid ကင်မရာ
command line မှ script တစ်ခုဖြင့်ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုကိုစစ်ဆေးပါ